Dalalka Reergalbeedka Iyo Qaramada Midoobay Oo Uga Digay Joogitaanka Dadkooda Ee Ethiopia - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Breaking News / DJibouti / Ethiopia / Somalia / Sudan/ south Sudan Jubba / Warar | By admin
Dhawaaqii Ra’iisal Wasaare Abiy ku sheegay inuu faranta dagaalka ku tegeyo si uu ciidamadda u hoggaamiyo oo xaaladda uga sii daray.
Addis ababa(ANN)-Dalalka Faransiiska iyo Jarmalka, ayaa ugu baaqay muwaadiniinta ka joogta dalka Ethiopia in ay deg-deg uga baxaan.
Dhawaaqa kasoo baxay labadan maaha kuwii ugu horeeyay ee uga digay dadkooda inay sii joogan dalka Ethiopia daagalada muddada sanadka baddan ka socday Woqooyiga dalka.
“In kasta oo ay jiraan xoogaa horumar ah oo curdin ah, taas oo khatar ugu jirta in laga gudbo korodhka millateriga ee labada dhinac,” Jeffrey Feltman ayaa u sheegay wariyayaasha ka dib markii uu ka soo laabtay hawl-gal uu ku tagay Addis Ababa.
Dhanka kale, hogaamiyayaasha Koonfur Afrika iyo Kenya ayaa Salaasadii ku booriyay dhinacyada iska soo horjeeda inay go’aansadaan xabbad-joojin deg-deg ah iyo wadahadal siyaasadeed.
Samuel Getachew, oo ah saxafi madax-banaan oo ku sugan Addis Ababa, ayaa u sheegay Al Jazeera in caasimadu tahay “magaalo xasiloon habeenkii” wallow ay socoto xaaladda degdegga ah.
“Waxaa jira dad badan oo ka cararaya Addis Ababa, oo ay ku jiraan muwaadiniin Faransiis iyo Turki ah,” ayuu yidhi, isagoo xusay in ku dhawaaqista Abiy ee ah inuu ku wajahan yahay jiida hore “waxay dad badan argagax ku noqotay”.
“Labada dhinacba waxay diyaar u yihiin inay dagaalamaan ilaa dhamaadka, u adeegsada awoodda militari si ay u xaliyaan khilaafaadka,” ayuu raaciyay. “, wuxuu sidoo kale sheegay in ay jiraan eedeymo badan oo soo noqnoqda oo u dhexeeya labada dhinac ee dagaalamaya.
Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Geeska Afrika, Olusegun Obasanjo, ayaa hoggaaminayay dadaallo xamaasad leh oo lagu doonayo in xabad-joojin lagu sameeyo, balse illaa hadda wax horumar ah oo la taaban karo ma muuqdaan.